"35 canug baa ii joogta, midkoodna aniga ma dhalin" - BBC News Somali
"35 canug baa ii joogta, midkoodna aniga ma dhalin"
Image caption Yuichi Ishii "wuxuu leeyahay" 25 qoys iyo 35 caruur ah oo u arka aabohood rasmiga ah
Yuichi Ishii waa nin caato ah indhihiisuna waa sida in ay kaa soo eegayaa weji daalan dhexdiisa.
La yaab malahan; waa 38 sano jir haysta caruur aad u badan oo aysan haysan kuwa da'diisa ah ee uu garanayo.
Laakiin, maalintii afar saacadood ka mid ah ayuu la joogaa, dhowr goor isbuucii mararka qaar, waxayna ku xiran tahay baahida macaamiishiisa.
Toban sano ka hor, Ishii wuxuu aasaasay Qoyska Jaceylka. Waa shirkad kireysa dad matala "qoysas iyo saaxiibo".
Waxaa u shaqeysa 2,200 oo qof oo matasha waalidiin, qaraabo, adeer ama eedo, iyo awoow ama ayeeyo.
Caannimada shirkaddiisa iyo wanaaga milkiilaha ayaa sababay in ay si xowliha ku ballaarato.
Maanta Ishii waa "aabaha" 35 caruur ah, wuxuuna BBC u sheegay in uu dareemayo sida in uu qeyb ka yahay 25 qoys, iyadoo midkoodna uusan dhab ahayn haddana.
"Waa been haddana waa dhab"
Ishii wuxuu sheegay in fikraddan aasaaska Qoyska Jaceylka ay timi 14 sano ka hor, ka dib markii saaxiibbadii mid ka mid ah ay wiilkeeda u dirtay iskuul kaas oo u baahday inuu su'aalo weydiiyay waalidka iyo canugga.
Waxay ahayd hooyo keligeed nool, ka dibna wuu caawiyay.
"Sidii aan rabnay maysan noqon sababtoo ah wiilka iyo aniga uma wada dhaqmi karin sida wiil iyo aabihii. Balse waxaan dareemay in ay jiri kartay arrin xiiso leh oo ah inaan qoys u baahanahay."
Qoyska Jaceylka, ayuu yiri, "waxay gacansiisaa dadka qaar ee u baahan caawinta".
"Aabe iska been abuur ah baan ahay, balse saacado gudahood waxaan ku noqonayaa saaxiibkaa ama qaraabadaada".
Image caption Qofkii afar saacadood loo kireysto inuu matalo saaxiib ama qaraabo, wuxuu helayaa qiyaastii $180 dollar
Kireyshashada saaxiibbo iyo qoys
Macaamiisha Ishii dalabkooda aad buu u ballaaran yahay.
Dadka qaar waxay jeclaan lahaayeen in kuwa uu jaceylka kala dhexeeyo ay la kulmaan waalidkooda, sabab kastoo jirtana ma doonayaan in waalidkooda dhabta ah ay baraan.
Xaaladahaas oo kale, adeegda Ishii wuxuu diyaarinayaa qoys matali kara macaamiilka, sida dherirka, midabka timaha iyo da'da saxda ah.
"Dadka ay dhibka ku tahay in ay saaxiibo yeeshaan, si fudud ayey u kireysan karaan saaxiib," ayuu yiri.
"Waxaan u dhaqmeynaa sida saaxiibada runta ah, si wadajir ah ayaan u aadeynaa dukaameysi, luga-baxsi, iyo wada sheekeysi."
Waxaa jiro dad kireysta ka qeybgalayaan xaflad oo aad u badan.
Mararka qaar dad odayaal ah ayaa kireysta kuwa u matalo in ay yihiin gabdhohooda, wiilashooda ama canug ay awoow u yihiin, si ay u abuuraan xaalad ay mar soo mareen ama weligood aysan soo arkin.
Aabaha waa doorka loogu jecel yahay
Doorka ay dad badan dalbadaan in loo matalo waa Aabaha sida Ishii uu sheegay.
Qiyaastii 200,000 oo qoys ayaa sannadkasta ku burbura Japan, caruurta badankoodana waxaa koriya aabe ama hooyo keli ah.
Ishii wuxuu ku doodayaa, si la mid ah bulshooyiinka kale, in waalidiintan keliga ah ay faa'iido haysan, adeegga uu bixiyana ka caawinayo inay u dhammeystiranto baahidooda bulsho ahaan.
Wuxuu intaa ku daray, "Ma jirta arrin aan lagu sameyn karin qoyskasta."
"Qoysaska qaar waxay u baahan yihiin aabe deggan, kuwana waxay doonayaan aabe xarago badan. Waan u sameyn karnaa. Waalid ad-adag, tusaale ahaan, oo luqad adag ku hadla."
Haddii caruurta ay yar yihiin, sheeko been ah ayaa loo baahanayaa oo aabaha ka dhigeysa inuu muddo safar ku maqnaa".
Qeybta ugu adag waa marka Ishii uu ku qasban yahay inuu cudurdaarto oo macsalaameynayo caruurta jilliinka sameyneysay.
"Ma fududa in caruur lala shaqeeyo. Waa murugo markaad aragto canug oynaaya. Waa qeyb ay adag tahay in la matalo".
Waa in aan is xasuusiyo canugeyga
Shaqaalaha Qoyska Jaceylka waxay ka koobnaan karaan shan qoys oo keli ah, balse tan iyo markii Ishii uu aasaasay shirkaddan, hadda wuxuu leeyahay illaa 25 qoys.
Illaa 35 canug ayaa u arka inuu yahay aabahooda dhabta ah, wuxuuna leeyahay 69 xiriir oo been ah oo uu ku matalo doorka saaxiibka ama qaraabada.
"Waa inaan xaqiijiyo xaaladda qoyska maalin kastaa, ka hor intaan gurigooda gaarin, maalin kasta. Waxaan haystaa buug ay iigu qoran yihiin dhammaan akhbaarta aan u baahanahay," ayuu yiri Ishii.
"Mararka qaar, waan illaawaa magac ama wax kale, markaas waxaan galayaa musqusha, waxaan la soo baxayaa buugga, waana eegayaa."
Wuxuu tilmaamay in taas aysan ka hor istaageyn inuu howshiisa waalidnimo fuliyo, sida in caruurta uu iskuulka geeyo subixii, galabkiina meelaha kubadda lagu ciyaaro, mararka qaarna wuxuu u kexeeyaa casho.
"Way howl badan tahay, fasaxna ma helo," ayuu hadalka ku daray.
"Waxaan go'aansadaa, waqtigeyga sakhsiyadeed in uu yahay habeenkii saqda dhexe illaa Seddaxda habeennimo. kama walwalo sida aan u daalanahay. Aflaan ayaan daawadaa, farshaxan ayaan sameeyaa... waa xilligeyga fasaxa. Qiyaastii seddax saacadood baan seexdaa maalintii".
Ganacsiga iyo dareenka
Ishii ma uusan guursan weli, mana lahan caruur uu isaga dhab u dhalay. Mana doonayo inuu guursado.
Wuxuu u maleynayaa, haddii uu sameysto qoys, in awoodi doonin in dareenka iyo walwalka kale ee 25-ta qoys ee kale uusan iska saari karin.
"Sidey dareemi lahaayeen haddii aan guursan lahaa?" ayuu Ishii yiri.
"Haddii ay caruur dhab ah ii joogi lahaayeen, waxaan ka baqi lahaa inaan u arko caruur kale oo been ah, wax kastana way isaga key qasmi lahaayeen."
Ishii wuxuu sheegay, inkastoo jilaayaasha ay u baahan yihiin kalgacaylka qoysaskooda iyo qaraabadooda, haddana ganacsiga in uu ku saleysan yahay isfahan u dhexeeya jilaaga iyo qofka macaamiilka ah oo la xiriira xaddiga xiriirka ay matalayaan.
Macaamiisha waxay bixiyaan $180 dollar, afartii saacba oo gaadiidka iyo qarashka shirkadda ay ku jiraan. "Qaali ayay ku tahay hooyo keligeed nool," ayuu yiri.
Runta xanuunka badan
Hal ku dhigga shirkadda Qoyska Jaceylka waa "Farxad dhaafsiisan xaqiiqada" balse xilliga fog, runta way adkaaneysaa in la qariyo.
Ishii wuxuu xasuustaa gabdho 20-jirro ah oo weli aaminsan inuu yahay aabohood dhabta ah.
Ishii waxay la tahay in waalidiinta ay ku qasban yihiin in mar uun ay caruurtooda u sheegaan runta. "Balse aniga taas ma go'aaminayo," ayuu yiri.
"Dhaqanka Japan waa mid soo dhoweyn iyo isxushmeyn ku dhisan, qiimana u yeelaya dadka. Qeybta dhibka badan waxay tahay walwalka faraha badan iyo xkameynta nafta iyo waxa dadka kale ay naga aaminsan yihiin," ayuu yiri.
"Way fiicnaan lahayd in shacabka aysan u baahnayn adeeg noocan ah, balse xaaladdu sidaa ma ahan."
"Dadka ay carruuruhu ka dhintaan oon taageero ka helin shaqada"